Iran: Rehefa jerena amin’ny alalan’ny sivana ny aterineto · Global Voices teny Malagasy
Iran: Rehefa jerena amin'ny alalan'ny sivana ny aterineto
Voadika ny 13 Febroary 2019 4:06 GMT
Manana fiarahamonina antserasera manan-danja ahitana bilaogy mavitrika 60.000 i Iran ary olona hatramin'ny 20 tapitrisa no mifandray amin'ny aterineto. Satria mavitrika ny tontolon'ny aterineto Iraniana, dia toy izany koa ny fanivanana ataon'ny governemanta amin'ny votoaty azon'ny olom-pirenena Iraniana idirana.
Ankoatra ireo tranonkala sary vetaveta, mikendry ireo tranonkala sy bilaogy marobe ara-politika sy ara-tsosialy ny manampahefana Iraniana, manakana ny maro tsy hahazo vaovao sy haneho ny heviny. Tsy manana tsipika mena voafaritra tsara ny governemanta Iraniana, ary manova matetika ny politikany momba ny sivana izy, “manome” na “maka” aina virtoaly araka izay tiany.
Ity sary ity no hitan'ireo mpiserasera aterineto Iraniana rehefa miezaka miditra amin'ny votoaty voasivana
Ato amin'ity lahatsoratra ity izahay hiresaka lohahevitra maromaro mifandraika amin'ny fanivanana ary hiezaka ny hanazava ireo tsy fifankahazoan-kevitra sasantsasany mahazatra.
-Tarehimarika goavana dia goavana:
Nitatitra ny manampahefana Iraniana tamin'ny taona 2006 fa bilaogy sy tranokala 10 tapitrisa no voasivana ary ny 90 isan-jaton'izy ireo dia nahitana votoaty “tsy mendrika”. Volana vitsy lasa izay, nilaza ny tatitra iray hafa fa bilaogy sy tranokala 5 tapitrisa no nakatona. Nilaza ihany koa ny tompon'andraikitry ny fitsarana tamin'ny faran'ny taona lasa, fa vola 5 tapitrisa dolara no ho ampiasaina amin'ny rafitra “fanivanana vaovao”. Manoloana ireo tarehimarika goavana ireo, mbola manana fanantenana kely i Bruce Etling avy ao amin'ny bilaogy “Tetikasa aterineto sy demokrasia ao amin'ny Berkman Center’ ao amin'ny Sekolin'ny Lalàna Harvard nanoratra fa manjavozavo ny fanambaran'ny governemanta Iraniana, ary mampiseho ny fikarohany manokana fa ampahany kely amin'ny tontolon'ny bilaogy Iraniana no voakatona.
-Laharam-pahamehana voalohany amin'ny sivana
Tranonkalam-baovao Persiana tahaka ny BBC Persian, AmirKabir, famoaham-baovaon'ny mpianatra, sy ny Balatarin, vavahadim-baovao malaza an'olo-tsotra.
Mpikatroka ny zon'ny vehivavy, hetsiky ny mpianatra, ireo bilaogy manohitra ny governemanta, ara-politika sy manohitra ny sivana ary momba ny zon'olombelona.
Tambajotra sosialy: voasakana ankehitriny ny Flickr sy Orkut, SAINGY tao anatin'ny roa volana lasa, afaka niditra Facebook sy YouTube ny Iraniana, na dia efa nakatona aza ireo teo aloha. Afaka miditra MySpace sy Twitter ihany koa ny Iraniana.
Mampiseho indray ny endriky ny fanovana ny politikan'ny sivana ny fanovan'ny fanjakana Iraniana ny politika momba ny Facebook sy YouTube. Tsy nambara ny anton'izany fanovana politika izany ka mahatonga ny olona handinika momba izany. Mihevitra ny sasany fa nanjary “miha-malefaka sy misokatra kokoa” ny governemanta satria hotontosaina amin'ny fahavaratra ny fifidianana filoham-pirenena. Ny hafa indray mihevitra fa te-hijery ireo olona ao amin'ny tranonkala tambajotra sosialy ny mpitandro filaminana mba hamantatra hoe ‘iza no’ ao amin'ny aterineto.
-Ahoana ny amin'ireo tranonkalam-baovao amin'ny teny Anglisy?
Afaka miditra amin'ny ankamaroan'ireo fampitam-baovao iraisam-pirenena toy ny New York Times na ny tranokalam-baovao Israeliana ny Iraniana. Mety mahagaga ny sasany ny mahafantatra fa voasivana efa ela ny gazety manohitra ny ady anti-Bush sy anti-Irak toy ny Huffington Post na Informed Comment izay maro no mangataka amin'ny governemanta Amerikana mba hiara-hiasa amin'i Iran. Redis
-Voasivana koa ve ny tranonkala islamika?
Eny no valiny. Fatemeh Rajabi, no vadin'ny mpitondra tenin'ny governemanta Iraniana ary mpanohana mafy ny filoha Mahmoud Ahmadinejad. Kanefa, mbola voasakana ny tranonkalany/bilaoginy. Nanevateva ireo mpanao politika ambony Iraniana izy. Voasivana ihany koa ireo tranonkala izay manohana ny filoha teo aloha, Mohammad Khatami, tahaka ny Yari News.
-Iza no manivana?
Ny komity mpanivana ofisialy dia ahitana ireo mpikambana ao amin'ny Minisiteran'ny Kolontsaina sy ny Tari-dalana Islamika, ny Minisiteran'ny Fitsikilovana, ny Fahitalavi-pirenena sy ny Radiom-pirenena. Ny Minisiteran'ny Fifandraisan-davitra Iraniana no manatanteraka ny baikon'izy ireo. Misy ny tatitra miely fa te handefa solontena ao amin'ny komity ihany koa ny polisy.
-Fijoroana vavolombelona sy tantara:
Fijoroana vavolombelona voalohany, tafatafa tamin'i Jomhour, bilaogera Iraniana.
Fitantarana vitsy avy amin'ny Global Voices momba ireo fanamby Iraniana, manomboka amin'ny fanivanana faobe hatramin'ny fihetseham-pon'ireo bilaogera voasivana.
Fantatro fa bilaogera marobe no miombon-kevitra amin'ny Freekeybord fa hadalana tanteraka ny fanivanana. Nilaza izy fa voasivana ny bilaoginy roa volana lasa izay, ary lasa nahazo mpitsidika betsaka nony teo aloha izy..
2 herinandro izayEmirà Arabo Mitambatra
02 Mey 2021Fanabeazana
Iran: Resabe tamin'ny diplaoma Oxford sandoka nataon'ny Minisitra – 2008
12 Marsa 2021Fanoherana
Soritan'ny hetsi-panoherana ataon'ny Baloch ny famoretana ireo vitsy an'isa ara-poko